at 9/20/2013 04:04:00 PM 1 comment:
၂၀၁၄ အကုန်တွင် ကုမ္ပဏီဥပေဒေသစ်အား ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် စီစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အကုန်တွင် ကုမ္ပဏီဥပဒေသစ်အား ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်လျက်ရှိပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပိုင်းတွင်း တိုးတက်လာရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီများအား အုပ်ချုပ်သည့် နည်းဥပဒေများအားပြင်ဆင်ရန် တို့အား ရည်ရွယ်ကာ ယခုကဲ့သို့ ဥပဒေသစ်ပြဋ္ဌာန်းရန် စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု Channel News Asia သတင်းတစ်ရပ်က ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော ဥပဒေမှာ ၁၉၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၉၉ နှစ်ကြာသည် အထိ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ယင်းအား နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဖိုရမ်တွင်သိရှိခဲ့ရသည်။
at 9/20/2013 02:21:00 PM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ ထားဝယ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပမည်
စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ ပွဲတော်ကို ထားဝယ်ဒေသ တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့များထံမှ သိရသည်။ ထားဝယ်လူငယ် များက ထားဝယ်မြို့အနီးရှိ စပါးတောင်တွင် လည်းကောင်း၊ ထားဝယ် အမျိုးသမီး သမဂ္ဂက ထားဝယ်မြို့ ဆိပ်ကမ်းသာခန်းမတွင်လည်းကောင်း အသီးသီးကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များထံမှ သိရ သည်။ ထားဝယ်အမျိုးသမီးသမဂ္ဂအနေနှင့် နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးက ငြိမ်းချမ်းရေးကို အဟန့်အတား ဖြစ်။ မဖြစ်၊ အမျိုးသမီးများ ပြင်ပဗဟုသုတ နည်းပါးသဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်သင့်။ မသင့်စသည့်ခေါင်းစဉ်များဖြင့် စကားစစ်ထိုးပွဲ (ဒီဘိတ်) ပြု လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ကဗျာပြိုင်ပွဲ၊ကလေးငယ်များ၏ ကလေးစစ်သားဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းတိုများလည်း တင်ဆက် မည် ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါ သမဂ္ဂ၏ ထားဝယ်စင်တာ တာဝန်ခံ ဒေါ်နှင်းအိက ပြောကြားသည်။
at 9/20/2013 02:16:00 PM No comments:
ရန်ကုန်တိုင်း ဥပဒေအရာရှိဟောင်းကို မကွေးတိုင်း ဥပဒေချုပ်ခန့်
နိုင်ငံတော်သမ္မတကပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာမထမ်းဆောင်နိုင်သောကြောင့် ထုတ်ပယ်ခဲ့ သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ဥပဒေချုပ်ဦးမောင်မောင်ဖြူတင့်နေရာတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဥပဒေအရာရှိဟောင်း ဦးဇေယျကို အစားထိုးခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ယနေ့ ထုတ်ပြန်သည်။ အသစ်ခန့် အပ်ခံရသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ် ဦးဇေယျသည် ယခင် တရားရုံးချုပ် ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဥပဒေအရာရှိအဖြစ် အဆင့်ဆင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အစိုးရသစ် တာဝန်ယူချိန်တွင် အငြိမ်းစား ယူခဲ့ကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏အစိုးရသစ်တာဝန်ယူပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ် က မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့သည့် ဦးမောင်မောင် ဖြူတင့်ကို တာဝန် ဝတ္တရားများကျေပွန်စွာမထမ်းဆောင်နိုင်သည့်အတွက် သြဂုတ်လ အတွင်းက တာဝန်မှ အနားပေးလိုက်ေ ကြာင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
at 9/20/2013 12:46:00 PM No comments:
ကျောက်ဖြူဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင်ဆယ်ဦးကို အမိန့်ချမည့် ရက်ချိန်း ဒုတိယအကြိမ် ပြောင်းလဲ
မြန်မာ-တရုတ်ပိုက်လိုင်း အကောင်အထည်ဖော်သည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီ CNPC ကို ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆန္ဒထုတ်ဖော် တောင်းဆိုသည့် မဒေးကျွန်း ရွာသားဆယ်ဦး စီရင်ချက်ချမည့်ရက် ကို ဒုတိယအကြိမ် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်ဟု တရားစွဲဆို ခံထားရသူများ၏ ရှေ့နေဦးထိန်လင်းက မဇ္ဈိမ သို့ ပြောသည်။ “အရင်တစ်ခေါက်ကတော့ တရားသူကြီးဘက်က ချို့ယွင်းချက်၊ အခုကတော့ ကျွန်တော် တို့ဘက်က ချို့ယွင်းချက် ရုံးတက်တဲ့သူမစုံလို့ အမိန့်ချမယ့်နေ့ကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတာပါ”ဟု ဦးထိန်လင်း က ဆိုသည်။ အမှုကို ပထမတစ်ကြိမ် စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် အမိန့်ချမည်ကို တရားသူကြီးက အမှု စီရင်ချက်ရေးဆွဲမှုမပြီးပြတ်သေးဟုဆိုကာ စီရင်ချက်ချမည့်ရက်ကို စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်ထိ ရွှေ့ဆိုင်းထား ခဲ့ပြီး ယခုအကြိမ်တွင် တရားရင်ဆိုင်နေရသူ ဆယ်ဦးအနက် ခုနစ်ဦးမှာ ခွင့်တိုင်ကြားခဲ့ပြီး ပျက်ကွက်ခဲ့ သဖြင့် တရားစီရင်မည့်နေ့ကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
at 9/20/2013 11:01:00 AM No comments:
မိတ္ထီလာ အကြမ်းဖက်မှု ခြောက်လကြာချိန်အထိ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများမှ ဒုက္ခသည်များအား ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခြင်း မရှိသေး၍ လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်
မတ် ၂၀ ရက်က မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင် ရသည်မှာ ခြောက်လကြာပြီ ဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်နေရာ ချထားပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဒုက္ခသည် အများအပြားမှာ လူမူရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သိရသည်။
မိတ္ထီလာမြို့ ခရိုင်အားကစား ကွင်းအတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသော ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတစ်ခုအား စက်တင်ဘာ လဆန်းက တွေ့ရစဉ်
at 9/20/2013 10:58:00 AM No comments:
တန်းဖိုးသင့်အိမ်ရာများ ရောင်းချရာတွင် လက်ထပ်ပြီးစ လူငယ်များအတွက် ဦးစားပေးမည့် ဥပဒေ ရေးဆွဲတင်ပြမည်
အစိုးရ လက်ရှိဆောက်လုပ်နေသည့် တန်ဖိုးသင့်တင့်အိမ်ရာများ ရောင်းချရာတွင် အဂတိလိုက်စားမှုမှ ကာကွယ်ကာ လက်ထပ်ပြီးစ လူငယ်များနှင့် အမှန်တကယ် လိုအပ်သူများကိုသာ ရောင်းချပေးမည့် ဥပဒေ တစ်ရပ်ရေးဆွဲတင်ပြမည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်မှ တိုင်းအမတ် ဒေါက်တာညိုညိုသင်းက ပြောဆို လိုက်သည်။“အစိုးရကိုအားကိုးလို့မရဘူး။ မြန်မာတွေရဲ့ ထုံးစံအရ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ အတွက်မဟုတ်ဘဲ တကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေကိုသာ ရောင်းဖို့ ဒီဥပဒေထဲ ထည့်ဆွဲမှာပါ” မဇ္ဈိမကို ပြော သည်။ အိမ်ယာများအတွက် ဥပဒေတစ်ရပ် ရေးဆွဲရန် အစိုးရကို တိုက်တွန်းသည့် အဆိုကို စက်တင်ဘာ ၁၈ရက်က ပြုလုပ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်တွင် ဒေါက်တာညိုညိုသင်းက တင်ပြထားသော်လည်း “ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ လွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းလို့ရှိရင်တော့အစိုးရကို ရေးဆွဲခိုင်းပြီး လွှတ်တော် ကို တင်သွင်းခိုင်းတာထက် ပိုပြီးတော့ မြန်ဆန်မယ်”ဟုဆိုကာ အဆိုကို ပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
at 9/20/2013 10:55:00 AM No comments:
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း မြေမြှုပ်မိုင်း ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကရင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အားလုံး ယာယီရပ်ဆိုင်းထား
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း မြေမြှုပ်မိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကရင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးက ယာယီရပ်ဆိုင်းထားကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)က အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအခြေအနေေ ပ်ါမူတည်၍ မြေမြှုပ်မိုင်း ရှင်းလင်းရေး အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ပြီး လတ်တလော အနေဖြင့် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေများတွင် မြေမြှုပ်မိုင်းရှင်းလင်းရန် အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း တရားဝင်ပြောကြား ထားသည်။ ထို့အတူ ယခင် DKBA ကလို့ထူးဘော ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်ကလည်း မြေမြှုပ်မိုင်း ရှင်း လင်းရေး အစီအစဉ်ကို ယာယီရပ်နား ထားကြောင်း သိရသည်။
at 9/20/2013 10:36:00 AM No comments:
Iran နိုင်ငံရဲ့ အသစ်တက်လာတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဆက်ဆံရေး တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်တဲ့ လက္ခဏာအဖြစ် အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ Iran နိုင်ငံဟာ nuclear လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဘယ်တော့မှ ကြိုးပမ်းမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ Iran သမ္မတ Hassan Rouhani က ကတိပြုသွားပါတယ်။ Iran က အရင်ကလည်း ဘယ်တုံးကမှ nuclear လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ဖို့ မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ လူအမြောက်အများသေဆုံးစေနိုင်တဲ့ လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်ဖို့လည်း ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့မှ မကြိုးစားခဲ့ဖူးပါဘူးလို့ NBC ရုပ်သံနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ပြောသွား ပါတယ်။သူ့နိုင်ငံသားေ တွဟာ နိုင်ငံရဲ့ အမှတ်အသားကို ကာကွယ်ဖို့ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ခွင့် ၊ ပြောဆိုခွင့်၊ Internet ပေါ်က အချက်အလက်တွေ ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှာဖွေ ခွင့်တွေရသင့်ပါတယ် လို့ Mr. Rouhani ပြောသွား ပါတယ်။
at 9/20/2013 09:00:00 AM No comments:
သန်းပေါင်း နှစ်ထောင့်ကိုးရာ ကုန်ကျမည့် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းနှင့်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးနှစ်ခုေ ဆာက်လုပ်ရန်ကိစ္စကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်က စက်တင်ဘာ ၁၈ က ပြုလုပ်သည့် တိုင်းလွှတ်တော်တွင် ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း ဆောက်လုပ်ရန် လွှတ်တော်က အတည်ပြု လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ထိုတရားရုံးနှစ်ခု ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ယခုဘဏ္ဍာနှစ်တွင် သန်းကိုးရာ ရရှိထားပြီး မလောက်သည့်အတွက် တိုင်းအစိုးရက နောက်ထပ် သန်းနှစ်ထောင် တောင်းခံခြင်းကို လွှတ်တော်က အတည်ပြု လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
at 9/19/2013 01:19:00 PM No comments:
ဖုန်းကတ်ထိန်ချန်ထားသည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို တိုင်ကြားလာပါက အရေးယူမည်ဟု ၀န်ကြီးပြော
အစိုးရက လစဉ် ရောင်းချပေးနေသည့် တန်ဖိုးနည်းဖုန်းကတ်များကို ခွဲတမ်းရရှိသလောက် အပြည့်အ၀ မဲဖောက် ရောင်းချမပေးသည့် မည်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုမဆို ပြည်သူလူထုက တိုင်ကြားလာပါက စစ်ဆေး အရေးယူ မည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ခင်က စက်တင်ဘာ ၁၈ က ပြုလုပ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော်တွင် ပြောဆိုလိုက်သည်။ လစဉ်မဲဖောက်ရောင်းချပေးသည့် ဖုန်းကတ်များကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အချို့က ခွဲတမ်းရရှိထား သလောက် ရောင်းချ မပေးဘဲ ထိန်ချန်ကာ ပြင်ပ သို့ ရောင်းချနေကြောင်း တိုင်ကြားစာများ ရရှိထားသည်ဟု လမ်းမတော်မြို့နယ်မှ တိုင်းအမတ် ဦးစိုးဝင်း ၏ မေးခွန်းကို ၀န်ကြီးက ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
at 9/19/2013 01:08:00 PM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လမ်းလျှောက်ပွဲ မြို့နယ်လေးခုသာ ခွင့်ပြုချက်ရ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် လူထုလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော်က အစိုးရထံတင်ပြထားပြီး လက်ရှိတွင် မြို့နယ်လေးခုသာ ခွင့်ပြုမိန့်ရ ထားသေးကြောင်း ဦးဆောင်သူများက မဇ္ဈိမကိုပြောကြားသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင်ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြို့နယ် ရှစ်မြို့နယ်ကို စီတန်းလှည့်လည်မည်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် ပြီးဆုံးမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသော်လည်း အာဏာပိုင်များက မြို့နယ်လေးခုသာ ခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။
“မြို့နယ်လေးခုတော့ ကျန်သေးတာပေါ့။ လေးခုကတော့ အဆင်ပြေသွားပြီ။ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ခွင့်ပြုချက်ရဖို့တော့ ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတုန်းပါပဲ” ဟု ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်လူငယ် ကိုဇင်ကိုကိုက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
at 9/19/2013 01:00:00 PM No comments:
မကွေးမြို့နယ်အတွင်း လယ်မြေသိမ်းမှုများ လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် စစ်ဆေးနေ
မကွေးမြို့နယ်အတွင်း မြေယာသိမ်းယူမှု ကိုးမှုကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ဖွဲ့စည်းထားသော လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် မကွေးတိုင်းအဖွဲ့(၅) အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးလှဆွေခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့သည် စက်တင်ဘာ၁၇ရက်က သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ကြားနာစစ်ဆေးမှုကို မကွေးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အစည်းအဝေးခန်းမှု တွင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှုကိုးမှုအတွင်း မြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှ ဂိုဒေါင်မြေနေရာကို သိမ်းယူ မှု၊ တောင်နွား ကူးကျေးရွာ တောင်သူများ ပိုင်သော မြေဧက (၁၀၃) ဧကခန့်ကို မကွေးပညာရေးကော လိပ်မှ သိမ်းဆည်းမှု၊ မယ်လှတောင်ကျေးရွာ အုပ်စုမြင်းကင်းကျေးရွာ ဦးအောင်မြတ်ထွေး၏ မြေအား ဆက်သွယ်ရေးဌာနမှ တာဝါ တိုင်ဆောက်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဌာနမှ ဓါတ်အားခွဲရုံဆောက်ရာ လျော်ကြေးမရမှု၊ ကန်ပြားကျေးရွာ ဦးပေါပိုင် မြေအား ရယကနှင့်ပေါင်းပြီး သိမ်း၍ဘော်ဒါဆောင် ဆောက်လုပ်မှုစသည့် တိုင်ကြားမှုများကို စစ်ဆေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
at 9/19/2013 12:59:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံကို ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အကူအညီများ ဆက်တိုက်ပေးအပ်နေသည့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံရုံးကို စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၌ စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်း နယူးဇီလန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။
ယခင်က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် အခြေစိုက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယူးဇီလန် သံရုံးကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အသိအမှတ်ပြုသည့် အနေနှင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နယူးဇီလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Murray McCullyက ပြောကြားသည်။
“လာမယ့်နှစ် မြန်မာ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူတဲ့အခါ ဝန်ကြီးအဆင့် အရာရှိ အစည်းအဝေးတွေ ရန်ကုန်သံရုံးမှာ အများအပြား လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်” ဟု ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
at 9/19/2013 12:47:00 PM No comments:
သံဃာတော်များ သွေးမြေကျခဲ့ရခြင်းအတွက် ၀န်ချတောင်းပန်ရန် တည်ဆဲအစိုးရကို တောင်းဆို
၂၀၀၇ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအတွင်းသံဃာတော်များ သွေးမြေ ကျခဲ့ရခြင်းအတွက် တည်ဆဲအစိုးရက ၀န်ချတောင်းပန်ရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၈ရက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ သာဓုကျောင်းတိုက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ခြောက်နှ စ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားတွင် ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များအဖွဲ့က တောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကို သာယာဖြောင့်ဖြူးစွာ သွားနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးနည်းအရ ငြိမ်းချမ်းရေး နည်းအရ ပြေလည်စွာ သွားနိုင်ရေးအတွက် သံဃာထုကို ၀န်ချလျှောက်ထားစေချင်တယ်” ဟု ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကာလတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ဆရာတော်ဦးစန္ဒာသီရိက အမိန့်ရှိသည်။
at 9/19/2013 12:43:00 PM No comments:
တရုတ်၏ ဖျက်အားပြင်းသော နျူကလီးယားလက်နက်များကို ခုခံကာကွယ် ရန် ဒုံးကျည်များ အိနိ်္ဒယက ပိုင်ဆိုင်ရန် ဆန္ဒရှိနေ
အိနိ်္ဒယက တရုတ်၏ ဖျက်အား ပိုပြင်းသော နျူကလီးယားလက်နက်များအား ခုခံကာကွယ်ရန် ဒုံးကျည်များ ပိုင်ဆိုင်ရန်လည်း ဆန္ဒရှိနေကြောင်း စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်က အေအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနမှ ဖော်ပြထားသည်။
အိနိ်္ဒယနိုင်ငံမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ စစ်ရေးစွမ်းရည်တိုးတက်လာမှုအား အမီလိုက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်ကလည်း ဘေကျင်းနှင့် ဥရောပတိုက်ရှိ နေရာတော်တော်များအထိ ပစ်ခတ်နိုင်သည့် နျူကလီးယား ဒုံးကျည်တစ်စင်းအား အိန္ဒိယမှ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် စမ်းသပ်ခဲ့ရာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့် နျူကလီးယားတိုက်ခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်သည့် လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးမှာ အောင်မြင်ရန် နီးစပ်နေပြီဖြစ်သည်။
at 9/19/2013 12:39:00 PM No comments:
သင်္ဃန်းကျွန်း တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော Elite World Trading Co., Ltd မှ သိန်း ၃၀၀ ကျော် ဖောက်ထွင်းအခိုးခံရ
စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီ အချိန်တွင် သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် ၊ စ/ သုမင်္ဂလာ ရပ်ကွက် ၊ သုနန္ဒာ (၁)လမ်း ၊ အမှတ်(၃၀) တွင် ဖွစ်လှစ် ထားသော Elite World Trading Co., Ltd အထွေထွေ မန်နေဂျာ မမေဇွန်ကျော်ဝင်း ၃၁ နှစ် (ဘ) ဦးကျော်ဝင်း သည် စတိုးခန်း ရုံးခန်း နှင့် ခြံဝင်းတံခါး သော့များအား စတိုး တာဝန်ခံ သိန်းထွဋ်ဂေါင် နှင့် အရောင်း ၀န်ထမ်း မဒေါင်နော် တို့အား အပ်နှံထား ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲ အချိန်တွင် ကုမ္ပဏီရုံးခန်း သို့ သိန်းထွဋ်ဂေါက် မရောက် လာသဖြင့် မဒေါင်နော် ၏ သော့ဖြင့် ခြံတံခါး နှင့် ရုံးခန်းသော့ များဖွင့်၍ ၀င်ရောက် ခဲ့ပြီး နောက်ဖေး တံခါး ပွင့်နေ၍ ရုံးခန်း အတွင်း စစ်ဆေး ကြည့်ရှုရာ အပေါ်ထပ် ရှိ မီးခံ သေတ္တာ အတွင်း ထားရှိသော ငွေစက္ကူ ရောရာ (၃၃၈) သိန်း ၊ အမေရိကန် ဒေါ်လာငွေ (၁၆၀၀) နှင့် အောက်ထပ် ရုံးခန်း အံဆွဲတွင် ထည့်ထားသော ငွေကျပ် သိန်း (၂၀) တို့ ပျောက်ဆုံး နေကြောင်း ၊ စတိုး တာဝန်ခံ သိန်းထွဋ်ဂေါင် အား ဆက်သွယ်ရာ မရရှိဘဲ ၄င်းအား အပ်ထားသော သော့အား ရုံးခန်း အတွင်း တွေ့ရှိ ရသဖြင့် တရားခံဟု ယူဆရသူ သိန်းထွဋ်ဂေါင် ၂၃ နှစ် (ဘ) ဦးတင်လှ ၊ ၁၂/ဥကတ (နိုင်) ၁၇၀ ၇၅၆ ၊ အမှတ် ၆၁၃ ၊ ကရုဏာ ၅ လမ်း ၊ တောင်ဥက္ကလာပ နေသူအား အရေးယူ ပေးပါရန် အထွေထွေ မန်နေဂျာ မမေဇွန်ကျော်ဝင်း မှ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့မ ရဲစခန်း သို့ တရားလိုပြ လုပ်တိုင်တန်း ခဲ့ရာ ရဲစခန်း မှ (ပ) ၃၇၉/ ၂၀၁၃ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၃၈၁ ဖြင့် အမှုဖွင့် လှစ်ထားရှိပြီး အမှုစစ် အဖြစ် စခန်းမှူး ဒုရဲမှူး သိန်းဟန် မှ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
at 9/19/2013 12:37:00 PM No comments:
နယ်စပ်ဒေသ လူဝင်မှုစစ်ဆေးရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် (န.စ.က) ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သော်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောခရိုင်တွင် လုံခြုံရေးအင်အား လုံလောက်စွာ ချထားကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ထိန်လင်းက ပြောကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနတို့၏ ၂၀၁၃- ၁၄ ခုနှစ် ဒုတိယ လေးလပတ်လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးတွင် ၎င်းက ယင်းသို့ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
at 9/19/2013 12:34:00 PM No comments:
နယူး ဒေလီ၏ အထင်ရှားဆုံးအထိမ်း အမှတ်အဆောက်အအုံများထဲ မှ တပ်ဂ်ျမဟာကဲ့သို့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိသော ခမ်းနားကြီးကျယ်သော သင်္ချိုင်းဂူဗိမာန်အား ငါးနှစ်မျှပြန် လည်ပြုပြင်ပြီးနောက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းဂူဗိမာန် မှာ မူလပုံစံမပျက်ပြုပြင်ထားသည် ဟု ဆိုသည်။
ဟူမာယန်၏ဂူဗိမာန်အား ၁၅၇ဝပြည့်နှစ်က အစ္စလာမ္မစ် မဂိုမင်းဆက်လက်ထက်၌ တည် ဆောက်ခဲ့သည်။ မဂိုဘုရင်တို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအား နှစ် ၃၀ဝကျော် စိုးစံခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂယူနက်စကို၏ ကမ္ဘာ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသောနေရာဖြစ် ပြီး နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်သည့်နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
at 9/19/2013 12:33:00 PM No comments:
နိုင်ငံခြားခိုးကူးခွေဖမ်းဆီးနေမှုကြောင့် အစည်းအရုံးအပေါ် အထင်မလွဲစေလိုဟု ဦးလူမင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့အပြား၌ ရောင်းချနေသော မြန်မာဇာတ်လမ်း၊ မြန်မာသီချင်းခိုးကူးခွေများကိုသာ ဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက် အဓိကဦးတည်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းခိုးကူးခွေများကို ဖမ်းဆီးရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအနေဖြင့် ဖိအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့သလို သက်ဆိုင်မှုလည်းမရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌဦးလူမင်းက ပြောကြားလိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ခိုးကူးခွေအရောင်းဆိုင်များကို ဖမ်းဆီးရာ၌ မြန်မာသီချင်း၊ မြန်မာဇာတ်လမ်းခွေနှင့် ညစ်ညမ်း ခွေများရောင်းချခြင်းမတွေ့ရဘဲ နိုင်ငံခြားကားဇာတ်လမ်းခွေများကိုသာ ရောင်းချနေသည်ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူခံရမှုများရှိနေသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအပေါ် ခိုးကူးခွေရောင်းချနေသူများက ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြသည်ဟု ဦးလူမင်းက ဆိုသည်။
at 9/18/2013 05:13:00 PM No comments:
ပန်းဘဲတန်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်မှ ကျပ်သိန်း ၈၀ ခိုးယူခဲ့သူကို ငါးနာရီအတွင်း ဖမ်းမိ
ပန်း ဘဲတန်းမြို့နယ်ရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်မှ ကျပ်သိန်း ၈၀ ခိုးယူခဲ့သူကို ငါးနာရီအတွင်း သက်ဆိုင်ရာမှ သက်သေခံပစ္စည်း များနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ ရုံးမှ သိရသည်။ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် (၁)ရပ်ကွက် တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော လျှပ်စစ် ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်တစ် ဆိုင်သည် နံနက် ၉နာရီအချိန် ဆိုင်ဖွင့်ပြီး အလုပ်သမားများနှင့် ဈေးရောင်းနေစဉ် ငွေကျပ်သိန်း ၂၈၀ သိမ်းထားရာမှ ကျပ်သိန်း ၈၀ ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း သိရ သည်။ဆိုင်ဖွင့်ပြီး မိနစ် ၃၀ အ ကြာတွင် စားပွဲဗီရိုအံဆွဲထဲတွင် ၁၄ရက်ကထည့်ထားသော ကျပ် ၁၀၀ဝတန် သိန်း ၂၀ဝနှင့် ကျပ် ၅၀၀ဝတန် သိန်း ၈၀ တို့ကို စစ် ကြည့်ရာတွင် ကျပ် ၅၀၀ဝတန် ငွေကျပ် သိန်း ၈၀ ပျောက်ဆုံးနေ သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
at 9/18/2013 05:06:00 PM No comments:
at 9/18/2013 05:05:00 PM No comments:
ယာဉ်တိုက်မှု ကြောင့် လ၀က်အတွင်း လမ်းဖြတ်ကူးသူ ၃ဦးသေ ၆ ဦး ဒဏ်ရာရ
ယခုလ၀က် အတွင်း ခရီးသည်တင်ယာဉ်မှ လမ်းဖြတ်ကူးသူအား တိုက်မ မှုကြောင့် ၃ ဦး သေဆုံးပြီး ၆ ဦးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း မထသ ( ဗဟို ) စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဌာနမှ သိရသည်။
စက်တင်ဘာ ( ၁ )ရက်မှ ( ၁၅ )ရက်အတွင်း ခရီးသည်တင်ယာဉ်တိုက်မှု ၊ တိမ်းမှောက်မှု နှင့် ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်စဉ် ၉ မှု ရှိပြီး ၄င်းအနက် ခရီးသည်တင်ယာဉ်မှ လမ်းဖြတ်ကူးသူ အားတိုက်မိမှု ၅ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မထသ ( ဗဟို ) မှ သိရသည်။
at 9/18/2013 05:03:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ (၁၀)မြို့နယ်အတွင်း ရေဖုံးလွှမ်းနိုင်ဟု နာဆာမှကြေငြာ
တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်ခုနစ်ခုမှ ၁၀ မြို့နယ်အတွင်း ရေဖုံးလွှမ်းမှု ကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်း နာဆာဂြိုလ်တု တိုင်းတာချက်မှ ထုတ်ပြန်ကြေ ညာထားကြောင်း မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က သူ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြသည်။
မိုးရွာသွန်းမှုများကြောင့် ရန်ကုန်၊ မအူပင်၊ သာယာဝတီ၊ ပဲခူး၊ ညောင်ဦး၊ ရေး၊ သထုံ၊ ဘားအံ၊ မော်လမြိုင်၊ ပုဂံမြို့နယ် များတွင် ရေဖုံးလွှမ်းမှုများ ကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်း နာဆာမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
“နာဆာက ထုတ်တဲ့ကြေညာချက်မှာ အနီရောင်ပြထားတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဧရာဝတီတောင်ပိုင်း၊ အရှေ့ မြောက်ပိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းတောင်ပိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် အနောက်ပိုင်းတွေမှာ ပိုပြီးရေဖုံးလွမ်းမှုပို လာနိုင်ပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကဆိုသည်။
at 9/18/2013 05:01:00 PM No comments:
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်မြို့က ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တခုမှာ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့ညက မြန်မာအလုပ်သမားတဦး ငြမ်းစင်ပေါ်က ပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
သေဆုံးသူဟာ ဧရာဝတီတိုင်း ၀ါးခယ်မမြို့နယ်က အသက် ၂၃ အရွယ် ကိုရဲထွန်းနိုင် ဆိုသူဖြစ်ပြီး ချင်းမိုင်စူပါဟိုက်ဝေးလမ်းမကြီးပေါ်က ဆန်ဒိတ်လမ်းဆုံ ၆ လွှာ ကုန်တိုက် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တခုမှာ ညဆိုင်းအလုပ်ဆင်းရင်း ၉ နာရီလောက်မှာ ၅ ထပ်လွှာ ငြမ်းစင်ပေါ်က ပြုတ်ကျပြီး နေရာမှာတင် သေဆုံးခဲ့တာလို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် အလုပ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
at 9/18/2013 04:59:00 PM No comments:
ချင်းပြည်နယ် မြွေတောင်ဖားတောင်မှ နီကယ်များ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက တရားမဝင်ခိုးထုတ်ခြင်းများရှိခဲ့ဟု စွပ်စွဲ
ချင်း ပြည်နယ် မြွေတောင်ဖားတောင်မှ နီကယ်များကို ကုမ္ပဏီတစ်ခုက တရားမဝင် ခိုးထုတ်ခြင်းများရှိခဲ့ ကြောင်း အထက်ချင်းတွင်းဒေသ လူငယ်များကွန်ရက်မှ ကိုကျော် သက်ဝင်းက ထုတ်ဖော်ပြောကြား သည်။လက်ရှိတွင်လည်း အဆိုပါ ဒေသ၌ နီကယ်ထုတ်ယူမည့်စီမံ ကိန်းတစ်ခုကို မြောက်ပိုင်း သတ္တု တူးဖော်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သည့် မိုင်းနင်းကုမ္ပဏီ မှ အကောင်အထည်ဖော်ရန် စီ စဉ်လျက်ရှိကာ ကင်ဘိုကုမ္ပဏီ မှာမူ ယခင်ကတည်းက နီကယ် တရားမဝင်ခိုးထုတ်နေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသို့ ထုတ်ယူမှု များကို ဒေသခံများပင် သိရှိခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း ယင်းကဆိုသည်။
ကြိုးဝိုင်းများအတွင်း နှစ်ကာလကြာ တရားမဝင်နေထိုင်သူများအတွက် သစ်တောကြိုးဝိုင်းများမှ ဧကပေါင်း ၄၄၀၀၀၀ ခန့် ပယ်ဖျက်ပေး
သစ် တောကြိုးဝိုင်းများမှ ဧကပေါင်း ၄၃၇၅၄၉ ဒသမ ၇၄ ဧကကို သစ်တောကြိုးဝိုင်းများတွင် နှစ် ကာလ အတန်ကြာတရားမဝင်နေထိုင်လာသူများအတွက်ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တော ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။ ယင်းသို့ ပယ်ဖျက်ပေးလိုက် ခြင်းမှာ မြို့ပြကျေးလက်ဒေသဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူလူထု ၏ စားဝတ်နေရေး၊ လူမှုစီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အညီ ပယ်ဖျက်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ''ပထမဆုံး ပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက် အိမ်ခြေ ၅၀ အထက်တွေ ကို သစ်တောမြေက နေ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
at 9/17/2013 01:38:00 PM No comments:
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး မဟာဗျူဟာမူဘောင် နှစ်မကုန်မီ အပြီးရေးဆွဲမည်
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးအတွက် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး မဟာဗျူဟာ မူဘောင်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းကို၂၀၁၃ခုနှစ်မကုန်မီအပြီးရေးဆွဲမည် ဖြစ်ကြောင်း မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေး လက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်မြတ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ Barefoot ကောလိပ်မှ နေစွမ်းအင်သုံး မီးလင်းရေး ပညာသင်ကြားပြီး ပြန်ရောက်လာသည့် အမျိုးသမီး ခြောက်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံသည့် စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့ ကျင်းပသည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ၎င်းက အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
at 9/17/2013 11:50:00 AM No comments:
နစ်ဆန်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကားငယ်များနှင့် ထရပ်ကားများ ထုတ်လုပ်တော့မည်
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ နစ်ဆန်း ကားတပ်ဆင်စက်ရုံ ကိုတွေ့ရစဉ်။
ဂျပန် ကားကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော နစ် ဆန်းက မလေးရှားကုမ္ပဏီ တစ်ခု နှင့်ပူးပေါင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကားငယ်များနှင့် ထရပ်ကားများ ယခုနှစ်အတွင်း စောနိုင်သမျှစော စော ထုတ်လုပ်တော့မည်ဖြစ် ကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ ရှိ နိကေးစီးပွားရေးသတင်းစာ က ယနေ့ရေးသားလိုက်သည်။
at 9/17/2013 11:10:00 AM No comments:
မြန်မာအသင်း သုံးပွဲဆက်အနိုင်ဖြင့် အကြို ဗိုလ်လုပွဲတက်
မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပနေသည့် အာဆီယံ အမျိုးသမီး ချန်ပီယံရှစ် ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ အုပ်စု (ခ) ပွဲစဉ်များကို ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် သုဝဏ္ဏကွင်း၌ ဆက်လက် ကျင်းပခဲ့သည်။
at 9/17/2013 10:47:00 AM No comments:
လုပ်သက်ရင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများကို မြေကွက်ပေးရန် မေးခွန်းထုတ်မှု ၀န်ကြီး အဖြေမပေး
အစိုးရဌာနအသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် လုပ်သက် ၂၅ နှစ်နှင့်အထက် ၀န်ထမ်းများသို့ အစိုးရက မြေကွက်များပေးရန် ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်တွင် မေးမြန်းရာ တိုင်းဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးက ယခင် အစိုးရက ပေးခဲ့သည်များကိုသာ ဖြေကြားခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် လုပ်ဆောင်ပေးမည်၊ မပေးမည်ကိုဖြေဆိုသွားခြင်း မရှိပေ။ မေးခွန်းထုတ်သည့် ကမာရွတ်မြို့နယ်မှ တိုင်းအမတ် ဦးမြငွေက “လုပ်သက်ရင့်ဝန်ထမ်းတွေ အငြိမ်းစားသွားတဲ့အခါ ဘ၀နေ၀င်ချိန်လေးမှာ ရင်အေးစေဖို့အတွက် ပေ ၄၀ x ပေ ၆၀ မြေကွက်တွေ ဖော်ထုတ်ပေးရန်” ဟု စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်က တိုင်းလွှတ်တော်တွင် ဆိုသွားခဲ့သည်။အိမ်စောင့်အစိုးရလက်ထက်မှစစ်အစိုးရလက်ထက်အထိ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ ကို မြေကွက် များပေးသည့် အစဉ်အလာများရှိခဲ့သဖြင့် လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တွင်လည်း ပြန်လုပ်ပေးရန် ဦးမြငွေက လွှတ်တော်တွင် မေးခွန်းထုတ်ကာ အရေးဆိုရခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
at 9/17/2013 10:43:00 AM No comments:
ဆီးရီးယား နိုင်ငံမှာ သူပုန်တွေ ကို နှိမ်နင်းဖို့ ဆာရင် ဓါတ်ငွေ့ ပါတဲ့ ဓါတုလက်နက်တွေ အသုံးချ ခဲ့ တယ်ဆို တာ အတိ အလင်း တွေ့ ရှိ ခဲ့ တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဘန်ကီမွန်း က အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သြဂုတ်လ ဒမတ်စ္စကတ် မြို့တော် တိုက်ခိုက်ပွဲမှာ ဆာရင် ဓါတ်ငွေ့ ပါတဲ့ ဓါတု လက်နက်တွေ အသုံးချ ခဲ့ တယ်ဆို တာ ကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီ စစ်ဆေး ရေးမှူးတွေ က သက်သေအထောက်အထား တွေ့ ရှိ ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရရှိခဲ့ တဲ့ တွေ့ ရှိ ချက် တွေ ဟာ လုံး ဝကို ငြင်းပယ်လို့ မရ နိုင်လောက်တဲ့ ခိုင်လုံ တဲ့ အထေက်အထားတွေ ဖြစ်တယ်လို့ လဲ ဆိုပါတယ်။ ထိခိုက်ခဲ့သူ တွေ ရဲ့ သွေးတွေ ကို ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ် စစ်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ ဆာရင် ဓါတ် ၈၅% ပါ ရှိ နေတာ ကို တွေ့ ရှိ ခဲ့ ပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင် လေထု စစ်ဆေး မှု အတွက် ပြုလုပ်တဲ့ နမူနာ တွေမှာ လဲ ဆာရင် ဓါတ်တွေ သေချာပေါက်ပါဝင်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ ရှိ ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
at 9/17/2013 10:23:00 AM No comments:
စိတ်ကြွဆေးပြားများနှင့် လက်နက် ခဲယမ်းများ ဖမ်းဆီးရမိ
ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ အိန္ဒုနယ်မြေရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် မူးယစ် ဆေးဝါးသတင်းအရ သက်သေများနှင့်အတူ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်က ဘားအံ မြို့နယ် အိန္ဒုကျေးရွာနေ မနန်းဖော်ထွန့် (၃၀)နှစ်၏ နေအိမ်အား ဝင်ရောက် ရှာဖွေရာ မနန်းဖော်ထွန့်နှင့်အတူ ၎င်းအိမ်သို့ မူးယစ်ဆေး ဝါးရောင်းဝယ်ရန်ရောက်ရှိနေသူ ကော့ဝုန်းကျေးရွာနေ စောရင်အေး(ခ)အခလိန်း(၂၀)နှစ်ပါ နှစ်ဦးတို့အား တွေ့ရှိရပြီး နေအိမ်အတွင်းမှ ပန်းရောင်စိတ်ကြွဆေးပြား ၂၆၆ ပြား (အလေးချိန် ၂၆ ဒသမ ၆ဂရမ်) တန်ဖိုးငွေကျပ် ၉၃၁၀၀၀ နှင့် ဘုရားခန်း အတွင်း ချိတ်ဆွဲထားသည့် အနက်ရောင် လွယ်အိတ်အတွင်းမှ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းချရငွေကျပ် ၂၁၀၀၀၀ တို့အား တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ သဖြင့် မနန်းဖော် ထွန့်ပါ သုံးဦးတို့အား အိန္ဒုနယ်မြေရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
at 9/17/2013 10:15:00 AM No comments:
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်မြေနေရာ အတွက် အိမ်ဖျက်ရန် ကြိုးစားရာမှ မိသားစုဝင်များနှင့် ဒေသအာဏာပိုင်များ တင်းမာမှုဖြစ်ပွား
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် မြေနေရာအတွက် စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်က မုံရွာမြို့ အိုးဘိုတောင် ရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ်ကို ဖျက်ရန်ကြိုးစားရာမှ မိသားစုဝင်များနှင့် ဒေသအာဏာပိုင်များ တင်းမာမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ မုံရွာမြို့ အိုးဘိုတောင် ရပ်ကွက်ရှိ အကွက် အမှတ် ၃၃၃-က မြို့ပြဧရိယာ ၆၂ ဒသမ ၆၆ ဧကကို အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနပိုင် မြေအဖြစ် အသုံးပြုခွင့်ရပြီး ဖြစ်သော်လည်း အိမ်ပိုင်ရှင် ဦးရဲထွဋ်(ခ) ဦးအောင်သိန်းက ဆက်လက် နေထိုင်သဖြင့် အရေးယူပေးရန် ဦးတိုက်လျှောက်ထားမှုကို မုံရွာမြို့နယ် တရားရုံးက လက်ခံစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်၊ ညနေ ၄ နာရီက အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ်တစ်လ ကျခံရစေရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက် စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ယင်းနေအိမ်အား ဖျက်ရန် ကြိုးစားခဲ့ရာမှ ပြဿနာ ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
at 9/17/2013 10:05:00 AM No comments:
လာရောက်ထုတ်ယူခြင်း မရှိသည့် အောင်ဘာလေထီ ဆုငွေပေါင်း သန်း ၅၀၀ ကျော်ရှိနေပြီး သိန်း ၁၅၀၀ ပေါက်သည့် ကံထူးရှင်လည်း ပါဝင်
ပြည်တွင်း အောင်ဘာလေထီ ဖြစ်သည့် ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀ အထူးဆုကြီး ပေါက်သည့် ကံထူးရှင်မှာ တစ်နှစ်ဝန်းကျင် ကြာသည်အထိ ဆုငွေကို လာရောက်ထုတ်ယူခြင်း မရှိသေးကြောင်း အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဌာနခွဲမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်သီတာက စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် The Daily Eleven သတင်းစာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းသို့ထီပေါက်ပြီး လာရောက်ထုတ်ယူခြင်း မရှိသည့် ဆုငွေစုစုပေါင်းမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း ၅၀၀ ကျော် ရှိနေကြောင်း အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဌာနခွဲမှ သိရသည်။
at 9/17/2013 09:58:00 AM No comments:
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ဟိုက်ဒရို ကလိုရို ဖလူရိုကာဗွန် သုံးစွဲမှု လျှော့ချရပ်ဆိုင်း သွားမည်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်း ပြောကြား
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ဟိုက်ဒရို ကလိုရို ဖလူရိုကာဗွန် သုံးစွဲမှု လျှော့ချရပ်ဆိုင်း သွားမည်ဟု စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုဇုန်းလွှာ ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်း က ပြောကြား ခဲ့သည်။၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ဟိုက်ဒရို ကလိုရိုဖလူရိုကာဗွန် သုံးစွဲမှုကို ရပ်ဆိုင်းရန်အတွက် သုံးစွဲမှု လျှော့ချရပ်ဆိုင်းရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်းကို ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနကို ကုလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ စက်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့၏ နည်းပညာနှင့် ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုများ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီ ယာ အသင်းတို့ ပူးပေါင်းပါဝင်၍ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလကစပြီး ရေးဆွဲခဲ့သည်။ စီမံကိန်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လတွင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့က သဘောတူ ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
at 9/17/2013 09:55:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင် ရေကြီးရေလျံမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး အလယ်ပိုင်းဒေသများ ဖြစ်ကြသော မန္တလေး၊ မြင်းခြံ၊ အောင်လံ၊ မကွေး၊ မင်းဘူး၊ ညောင်ဦး၊ မုံရွာ၊ ပခုက္ကူ စသည့် ဒေသများ တွင် မြစ်ရေ ကြီးမှုကြောင့် နေရာအနှံ့ ရေကြီးရေလျံမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကာ ရွာများပြောင်းရွှေ့၍ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင်နေရကြောင်း သိရသည်။
at 9/17/2013 09:54:00 AM No comments:
တရုတ်အမျိုးသားများ၏ ဇနီးအဖြစ် မြန်မာအမျိုးသမီးများအား ၀ယ်ယူမှုနှုန်း မြင့်တက်နေခြင်းကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် တရုတ်နှင့် မြန်မာ တာဝန်ရှိသူတို့ ညှိနှိုင်း
တရုတ်အမျိုးသားများ၏ ဇနီးအဖြစ် မြန်မာအမျိုးသမီးများကို သိန်းဆယ်ဂဏန်းဖြင့် ၀ယ်ယူမှုနှုန်း မြင့် တက်နေခြင်းကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် ပြုပြင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံ ရဲအရာရှိ ကြီးများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်တားဆီး နှိမ်နှင်းရေးတို့ ညှိနှိုင်းလျက် ရှိကြောင်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ လက်ရှိတွင် ကုန်ကူးခံရမှုနှုန်း မြင့်တက်လျက်ရှိပြီး အဓိက ဆက်သွယ်သည့် နိုင်ငံမှာ တရုတ်နို င်ငံ ဖြစ်နေပြီး အများစုမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးများကို ကျပ် ၂၅ သိန်း နှင့် သိန်း ၅၀ အကြားပေး၍ ၀ယ်ယူေ နကြောင်း သိရသည်။
at 9/17/2013 09:33:00 AM No comments:
အိန်္ဒိယနိုင်ငံသည် နျူကလီးယားထိပ်ဖူးတစ်ခုကို သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တစ်စင်း အား ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် အောင်မြင်စွာ ပစ်လွှတ်စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ရာ အိန်္ဒိယ၏ စစ်ရေးစွမ်းရည်နှင့်ပတ်သက် သည့် တိုးတက်မှုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်က အေအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနမှဖော်ပြ ထားသည်။ Agni V ဟု အမည်ပေးထားသည့် ထိုဒုံးကျည်အား ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၈နာရီ ၅၀ မိနစ်တွင် အိန်္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း Orissa ပြည်နယ်အနီး ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်ရှိ ဒုံးကျည်ပစ်စင်တစ်ခုပေါ်မှ ပစ်လွှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
at 9/17/2013 09:28:00 AM No comments:
ဂျပန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Nissan Motor သည် ၎င်း၏ အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်နှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မော်တော်ယာဉ်ငယ်များ (Small Passenger Cars) နှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ငယ်များ (Pickup Trucks) ထုတ်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Nikkei Business Daily ၏ သတင်းဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။ Nissan အနေဖြင့် ၎င်း၏မိတ်ဖက် Tan Chong Motor Holdings Bhd နှင့် ပူးပေါင်း ပြီး မော်တော်ယာဉ် တပ်ဆင်ရေး စက်ရုံတည်ထောင်ရန် စီစဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Nissan မော်တော်ယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများကို ရေကြောင်းဖြင့်သယ်ဆောင်လာပြီး ပြန်လည်တပ်ဆင်ကာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချ မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
at 9/17/2013 09:22:00 AM No comments:
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်အခြေစိုက် လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာ လာမယ့်နှစ်လအတွင်း တရားဝ င်နိုင် ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံကာ လနောက် ပိုင်းကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာ အဲဒီလိုမှတ်ပုံတင်နိုင် ဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပါအဝင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နဲ့ပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးအောင်မိုးဇော်က RFA ကို အခုလို ပြော ပါတယ်။
at 9/17/2013 09:19:00 AM No comments:
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်မြို့လယ်က ရေတပ်အဆောက်အအုံတခုမှာတွေ့ရာမရှောင်သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့မှု အတွင်း သေနတ်သမားလို့ ယူဆရသူ အပါအဝင် လူ၁၃ဦး သေဆုံးသွား ပါတယ်။သေနတ်သမားလို့ ယူဆရသူဟာ ၂၀၁၁ခုနှစ်အထိ အမေရိကန် ရေတပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ အသက် ၃၄နှစ် အရွယ် တက္ကဆက်စ် ပြည်နယ်သား တဦး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။နောက်သေနတ်သမားတဦးလည်း ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်နေဆဲပဲလို့ ရဲတွေက ယူဆနေကြပါတယ်။အနားမှာ ရှိတဲ့ အမေရိကန် ဆီးနိတ် လွှတ်တော်ကို ယာယီ ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုလို့ ယူဆစရာ အကြောင်းမ ရှိပေမယ့် အကြမ်းဖက်မှု မဟုတ်ဘူးလို့တော့ တပ်အပ် မပြောနိုင်ဘူးလို့ ဝါရှင်တန် မြို့တော်ဝန် က ပြောပါတယ်။အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားက ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို နောက်ထပ် လူအစုလိုက် အပြုံလိုက် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုတခုအဖြစ် ဖေါ်ညွှန်းပြောဆိုလိုက်ပြီး ထိခိုက် သေဆုံးခဲ့သူတွေအတွက် ဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိကြောင်း ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
at 9/17/2013 09:00:00 AM No comments:
at 9/16/2013 03:43:00 PM No comments:
တရုတ် ရေငုပ်သင်္ဘောတွင် အမျိုးသမီး ရေယာဉ်မှူး များကို ရွေးချယ် ခန့်အပ် သွားမည်
တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဌာနသည်၊ ပင်လယ်ရေအောက် လေ့လာရေး ရေငုပ်သင်္ဘော တစ်စင်းတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင် ရန်အတွက် ပညာတတ်ဘွဲ့ရ အမျိုးသမီး ရေယာဉ်မှူး နှစ်ဦးကို ရွေးချယ် ခန့်အပ်သွားရန် စီစဉ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ရာထူးအတွက် လာရောက် လျှောက်ထားသူ အရေအတွက်မှာ ၁၀၀ နီးပါးခန့် ရှိပြီး ၎င်းတို့အနက် အများစုတွင် မဟာဘွဲ့ သို့မဟုတ် ပါရဂူဘွဲ့ရများ ပါဝင်ကြောင်း ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆင်ဟွာ သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
at 9/16/2013 03:41:00 PM No comments:
စက်ဘီးအတိုက်ခံရသော်လည်း ဆိုးဆိုးရွားရွား မဖြစ်ခဲ့ဟု နစ်ကိုးလ် ပြောကြား
ပါပါရာဇီ သတင်းထောက် တစ်ဦး၏ စက်ဘီးဖြင့် ဝင်တိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့် နစ်ကိုးလ်ကစ်ဒ်မင်းက မိမိ၏ အခြေအနေ အဆင်ပြေကြောင်း ပရိသတ်များအား အသိပေးခဲ့ သည်။ နယူးယော့ခ်တွင် ကြာသပတေးနေ့က အရှိန်ဖြင့် မောင်းလာသည့် စက်ဘီးတစ်စင်းဖြင့် ဝင်တိုက် မှုကို ခံခဲ့ရသည့် ဟောလီးဝုဒ် မင်းသမီးသည် ခြေပစ်လက်ပစ် ပြုတ်ကျ သွားပြီးနောက် သူမအနေဖြင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသွားမည်ကို ပရိသတ် များက စိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်။
at 9/16/2013 03:39:00 PM No comments:
တ စ္ဆေ ဆို တာ ဂျို နဲ့ လား(သင်ရော သရဲ၊ တစ္ဆေများကို ယုံကြည်သူတစ်ဦးလား ??)
`တ စ္ဆေ ဆို တာ ဂျို နဲ့ လား´
သင် သရဲ၊ တစ္ဆေတွေကို ယုံပါသလား ? ဒါဟာလူတိုင်းမေးလေ့ရှိကြတဲ့ မေးခွန်းပါ၊ သရဲ၊ တစ္ဆေနဲ့ ၀ိညာဉ်ဆိုတဲ့ အရာတွေ တကယ်ရှိမရှိဆိုတာဟာ ရှေးယခင်ကတည်းကနေ ယနေ့ထက်တိုင် ငြင်းခုန်နေကြဆဲ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ ယနေ့ရှင်သန်နေတဲ့ လူသားများရဲ့ တစ်ဝက်လောက်က သရဲရှိတယ်ဆိုတာကို မယုံဘူးလို့ မငြင်းကြပါဘူး၊ တစ်ခြားတစ်ဝက်ကတော့ သိပ္ပံနည်းကျရှင်းပြနိုင်တဲ့ ကိစ္စများကိုသာ ယုံကြည်ပြီး၊ ၀ိညာဉ်လောကဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတွေပါလို့ ထင်မြင်ယူဆထားကြပါတယ်။
at 9/16/2013 02:10:00 PM No comments:
တောင်ကိုရီးယားနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နယ်စပ်က Kaesong စက်မှုဇုန် ကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် သဘော တူညီလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။၅ လကြာ စက်ရုံလည်ပတ်မှု ရပ်ဆဲထားရာကနေ ပြန်လည် စတင် ရန် နှစ် ဦး နှစ်ဘက် ပြန်လည် သဘောတူညီ လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း စက်မှုဇုန်မှာ တောင်ကိုရီးယား ကုမ္မဏီပေါင်း ၁၃၂ ခုတောင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး လည်ပတ် နေပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအတွက်ကော၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါ ရည်ရွယ်လို့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြတဲ့ စက်ရုံဖြစ်ပေမယ့် ဆက်ဆံရေးတင်းမာတဲ့ အခါတိုင်းပိတ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ ဖွင့်လှစ်မှုကလည်း အချိန်ဘယ်လောက် ကြာမြင့်မယ်ဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားကမန်နေဂျာအဆင့်နဲ့ ရိုးရိုးအဆင့်လုပ်သားပေါင်း ၈၂၀ သွားရောက်လုပ် ကိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူုတို့အတွက်လုံခြုံရေးကိုမြောက်ကိုရီးယားမှလည်းအာမခံပေးထားပါတယ်။ စည်းကမ်းလည်းတင်းကြပ်ပါတယ်။ အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်မရှိ၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ ဘူး။ သယ်ဆောင်လို့လည်း မရ ပါဘူး။ ဒီအတွက် လည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေပြီ ဖြစ်ပါ တယ်။၅ လကြာ တင်းမာခဲ့တဲ့ တောင်နဲ့ မြောက်ကိုရီယားဆက်ဆံရေးဟာ အနည်းငယ်ပြန်လည် ပြေလည် လာတဲ့ အနေအထား တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိ လာကြောင်း သိရပါတယ်။ .
at 9/16/2013 02:08:00 PM No comments:
ရန်ကုန် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ယခင် မီးရထားရုံးချုပ် အဆောက်အဦးကို အဆင့်မြင့် ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ် ဆောက်လုပ်ခွင့် ရရှိထားပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည် ဖြစ်ကြောင်း ဟိုတယ်ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ဒါ ရရှိထားသော Dosim Engineering & Construction ကုမ္ပဏီမှ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဒေါ်နန်းနွယ်ဖေက ပြောကြားသည်။
မြန်မာ့ မီးရထားရုံးချုပ် အဆောက်အဦးအား အဆင့်မြင့်ဟိုတယ် အဖြစ် မွမ်းမံပြုပြင် ဆောင်ရွက်နေသော အစီအစဉ်များ အကြောင်းကို ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံကာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တရပ်ကို ယခုလ ၁၄ ရက်နေ့က ယင်းဟိုတယ် ဆောက်လုပ်ခွင့် ရရှိထားသည့်နေရာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
at 9/16/2013 01:49:00 PM No comments:
နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော်အတွင်း တစ်ကျော့ပြန် လုပ်ဆောင်သည့် ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက် ယူမှုကထွက်ပေါ်လာမည့် ကိန်းဂဏန်းများကို အခြေခံကာ နိုင်ငံတော် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများရေး ဆွဲဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးခင်ရီ ပြောကြားသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် လုပ်ဆောင်မည့် ယင်းစီမံကိန်းသည် နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေးစသည့် အရေးအရာများအ တွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ မျိုးထဲတွင် မပါဝင်သည့်လူမျိုးများက သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ၎င်းတို့ လူမျိုးကိုတရားဝင် သတ်မှတ်ပေးရန် စာဖြင့် တောင်းဆိုမှုများရှိကြောင်း၊ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံမှုကို နိုင်ငံရေးနှင့် ရောနှော၍ မရကြောင်း ဦးခင်ရီက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
at 9/16/2013 01:28:00 PM No comments:
"Vaclav Havel အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျေးဇူးစကားပြောဆို"
ကွယ်လွန်သူချက်သမ္မတဟောင်း ၊ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် Vaclav Havel ဟာ နိုဘယ်ဆု ရွေး ချယ်ရေးေ က်ာမတီက ၁၉၉၁ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု အတွက် သူ့ကို စာရင်းထဲထည့်ထားတာကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး၊ သူ့အစား မိမိ ကို ထည့်သွင်းဖို့ အဆိုပြုခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ချက် သမ္မတ နိုင်ငံ ပရပ်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၇ ကြိမ်မြောက် Forim 2000 ညီလာခံမှာ ပြောကြားခဲ့တာပါ။
“အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ၊ မစ္စတာ Vaclav Havel အဆိုပြုခဲ့လို့သာ ကျမ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ရ တာပါ၊ ဒါဟာ လျို့ဝှက်ထားစရာ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူသာ မူလ အဆိုပြုချက်ကို လက်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင် ၁၉၉၁ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်း ရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဟာ မစ္စတာ Vaclav Havel ဖြစ်သွားမှာပါ၊ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးကာလ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ခံအားပေးခဲ့တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်၊ ကျမတို့အတွက် အဆိုးရွားဆုံး အချိန်ကာလမှာ မျှော်လင့်ချက်အလင်းရောင် ထွန်းညှိပေးခဲ့တာဟာ ဘယ်လိုမှ မမေ့နိုင်စရာပါ “ လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
at 9/16/2013 11:22:00 AM No comments:
တစ်နေ့တခြားဈေးနှုန်းမြင့်မာလာနေတဲ့မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းကိုဝယ်ယူသူနည်းပါးလာနေတဲ့အတွက် ဈေးကွက် ပျက်သွားမှာ စိုးရိမ်နေရကြောင်း တရုတ် ကျောက်မျက်ကုန်သည်တွေက ပြောပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်ကစလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ (၈)နှစ်အတွင်း အရည်အသွေးမြင့် မြန်မာ့ ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးတွေ နဲ့ ကျောက်စိမ်း လက်ဝတ်ရတနာ အချောထည်တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းဟာ မှန်မှန်ကြီးမြင့်တက်လာခဲ့ရာက၊ အခု အခါဝယ်နိုင်သူနည်းပါးလာနေတဲ့အတွက်မကြာခင်ဈေးကွက်ပျက်သွားနိုင်တယ်လို့ ဟောင်ကောင်ကျောက် မျက် ရတနာပြပွဲမှာ ကျွမ်းကျင်သူ တွေ က ပြောဆိုကြောင်း AFP သတင်းက ဖောါပြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲတွေမှာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်အတွင်း လာရောက်သူ ရတနာ ကုန် သည် အရေအတွက် ကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
at 9/16/2013 11:18:00 AM No comments:
သံတိုသံစ အဟောင်းများ အောက်တွင် လျှို့ဝှက်သယ်ဆောင် လာသော တရားမ၀င် ကျွန်းသစ်များ ဖမ်းဆီးရမိ
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) ပင်လောင်းမြို့ ၊ ရင်းမှီး စစ်ဆေးရေးဂိတ် တွင် စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက် နံနက် ၇နာရီခွဲက တရားမဝင် ကျွန်းသစ်များ ဖမ်းဆီးရမိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဖြစ်စဉ်မှာ ပင်လောင်း မြို့မရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် ရန်နိုင်ဆွေ ဦးစီး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် တောအုပ်ကြီး ဦးကျော်သန်း ပါဝင်သော ပူးပေါင်း အဖွဲ့သည် သတင်းအရ သက်သေများ နှင့်အတူ ပင်လောင်းမြို့ ၊ ရင်းမှီး စစ်ဆေးရေး ဂိတ်တွင်လွိုင်ကော်မှ အောင်ပန်း သို့ ယာဉ်မောင်း ဝင်းကျော် ၄၅ နှစ် (ဘ) ဦးတင်ဝင်း ဓမ္မာရုံ ရပ်ကွက် လွိုင်ကော်မြို့ နေသူ မောင်းနှင်ပြီး ယာဉ်နောက်လိုက် ကျော်နိုင်ဝင်း ၃၂ နှစ် (ဘ) ဦးဘဝင်း လွိုင်ကော်မြို့ နေသူတို့ မောင်းနှင် လာသော နစ်ဆန်း ဒီဇယ် ၁၂ ဘီးယာဉ်အား ရပ်တန့် ရှာဖွေ စစ်ဆေးရာ ယာဉ်ပေါ်တွင် သံတိုသံစ အဟောင်း များ အောက်တွင် လျှို့ဝှက် သယ်ဆောင် လာသော ကျွန်းခွဲသား အရွယ်စုံ ၁၁ ဒသမ ၉၄၂၄ တန် ၊ စုစုပေါင်း တန်ဖိုး ငွေကျပ် ၁၁၉၄၂၄ဝဝိ ကို လည်းကောင်း ၊ လွိုင်ကော်မှ အောင်ပန်းသို့ ယာဉ်မောင်း မျိုးဝင်း ၅၂ နှစ် (ဘ) ဦးကျော်ဝင်း ရှမ်းပိုင်း ရပ်ကွက် ၊ လွိုင်ကော်မြို့ နေသူ မောင်းနှင်ပြီး ယာဉ်နောက်လိုက် မောင်ဖြူ ၅၁ နှစ် (ဘ) ဦးလှဆောင် ဒေါနိုးကူ ရပ်ကွက် ၊ လွိုင်ကော်မြို့ နေသူတို့ မောင်းနှင် လာသော နစ်ဆန်း ဒီဇယ် ၁၂ ဘီးယာဉ်အား ရပ်တန့် ရှာဖွေ စစ်ဆေးရာ ယာဉ်ပေါ်တွင် သံတိုသံစ အဟောင်းများ အောက်၌ လျှို့ဝှက် သယ်ဆောင် လာသော ကျွန်းခွဲသား အရွယ်စုံ ၁၂ ဒသမ ၄၂၉၄ တန် ၊ စုစုပေါင်း တန်ဖိုး ငွေကျပ် ၁၂၄၂၉၄ဝဝိ တို့အား လည်းကောင်း ရှာဖွေ သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည်။
at 9/16/2013 11:12:00 AM No comments:
ဂျပန်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့၏ အဆိုအရ တရုတ်ကင်းလှည့်သင်္ဘောများသည် ဆန်ကာကူကျွန်း များထဲမှ တစ်ကျွန်းဖြစ်သော ကူဘကျွန်းအနီး ရေပြင်အတွင်းသို့ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁ဝ နာရီခန့်တွင် အရှေ့မြောက် ဘက်မှ ဝင်ရောက် လာခဲ့ပြီး ¤င်းရေပြင် တစ်ဝိုက်တွင် ရပ်နား ထားခဲ့ကြောင်း ၊ ထို့နောက် ညနေ ၃ နာရီ ခန့်တွင် ဂျပန် ရေပိုင်နက် ၏ပြင်ပ ၂၅ ကီလိုမီတာ ( ရေမိုင် ၁၅ ဒသမ ၅ မိုင် ) ခန့်ကွာဝေးသော နေရာသို့ ဆက်လက် ခုတ်မောင်း သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
at 9/16/2013 10:50:00 AM No comments:
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက ဇူလိုင်လမှစတင်ကာ ကျပ် ၁၅၀၀ နှုန်းဖြင့် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှတစ်ဆင့် အရေအတွက် ကန့်သတ်ရောင်းချပေးနေသည့် GSM လိုင်းကတ်များကို အရေအတွက်တိုးမြှင့်ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ အကြီးတန်း အရာရှိ တစ်ဦးကပြောကြားသည်။ ကျပ် ၁၅၀၀ တန် GSM မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် အသီးသီးတို့ ဇူလိုင်လအတွင် လိုင်းကတ် နှစ်သိန်း၊ သြဂုတ်လအတွက် လိုင်းကတ်နှစ်သိန်းတစ်သောင်း ခွဲဝေရောင်းချပေးခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလခွဲတမ်းတွင်ထပ်မံတိုးမြှင့် ရောင်းချပေးနိုင်ရန် စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၄င်း ကထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
at 9/16/2013 10:45:00 AM No comments:
စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲခန့်က ဗန်းမော်ခရိုင်(မှုခင်း) အထူးနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့မှ ဒုရဲအုပ်အောင်အောင်နှင့်အဖွဲ့ဗန်းမော်မြို့မရဲစခန်းမှနယ်ထိန်းတပ်ကြပ်ကြီးမြင့်နိုင်တို့သည်သက်သေများနှင့် အတူ ဗန်းမော်မြို့နယ် မံရွတ်ကျေးရွာတောင်ဘက် လေးဖာလုံခန့်အကွာ ချုံတောအတွင်းတွင် တွေ့ရသူ လှညွန့်(ခ)ကိုပို (၃ဝ နှစ်)၊ တူးမိုင် (ခ) သင်းဆွေ (၁၈နှစ်)၊ နေလင်းထွတ်(ခ)သားငယ် (၂ဝနှစ်)၊ အဒူးဘိုင် (ခ)အဒူးကလင်း (၃၆ နှစ်)၊ မျိုးမင်း(ခ)သားငယ် (၂၄ နှစ်)တို့အားစစ်ဆေးရှာဖွေရာ လှညွန့် (ခ) ကိုပု (၃ဝနှစ်) ဝတ်ဆင်ထားသည့် အတွင်းခံဘောင်းဘီအတွင်း၌ ဘိန်းဖြူဟုယူဆရသော ဖြူဝါကျားမှုန့် ဝ ဒသမ ၃ ဂရမ်နှင့် ဝဒသမ ၄ ဂရမ်ပါ ပင်နီဆီလင်ပုလင်းနှစ်ပုလင်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချရငွေဟုယူဆရသော ငွေစက္ကူရောရာ ၄၈ဝဝဝ ကျပ်ကိုလည်းကောင်း ၊ တူးမိုင်(ခ)သင်းဆွေ(၁၈နှစ်) ဝတ်ဆင်ထားသည့် ဂျင်းဘောင်းဘီ ဘယ်ဘက်အိတ်ကပ်အတွင်း၌ ပင်နီဆီလင်အလွတ်သုံးပုလင်းနှင့် ငွေစက္ကူရောရာ ၁၃၅ ဝဝဝ တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဗန်းမော်ရဲစခန်းက မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ် ကို ပြောင်းလဲစေသောဥပဒေပုဒ်မဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
at 9/16/2013 10:35:00 AM No comments:
ယခုနှစ်ကုန်အထိပင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အကုန်လွတ်မြောက် ဦးမည်မဟုတ်ဟု ကိုကိုကြီးဆို
လွှတ်ပေးရန်စိစစ်နေဆဲမှာပင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ထပ်တိုးလာနေသောကြောင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန် ပြောဆိုထား သကဲ့သို့ အကျဉ်းထောင်များထဲတွင်ရှိနေသည့် နိုင်/ကျဉ်းအားလုံးကို ယခုနှစ်ကုန်တွင်လွှတ်ပေးမည်မှာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း နိုင်/ ကျဉ်းစိစစ်ရေးကော်မတီဝင်ဖြစ်သည့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုကြီးက သုံးသပ် ပြောဆိုလိုက်သည်။
“သမ္မတကြီးမျှော်မှန်းတဲ့ အကျဉ်းသားတစ်ယောက်မှ မကျန်အောင်လွှတ်ဖို့ဆိုတာ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ မလွယ်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၊ အလုံမြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနား သို့ တက်ရောက်လာသည့် ဦးကိုကိုကြီးက မဇ္ဈိမ၏မေးမြန်းမှုကို ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
at 9/16/2013 10:22:00 AM No comments:
အချုပ်သားတစ်ဦးသေဆုံးကာ လူငါးဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည့် ကော့သောင်းအကျဉ်းထောင် ပစ်ခတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနများက မှားယွင်းထုတ်လွှင့်သည်ဟုဆိုကာ အကျဉ်းသားများက မကျေနပ်သောကြောင့် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အခင်းဖြစ်သည့်နေ့က နိုင်ငံပိုင်အသံလွှင့်ဌာနမှ ယင်းကိစ္စကို သတင်းထုတ်လွှင့်ရာတွင် “အကျဉ်းသားများ ထောင်ဖောက် ထွက်ပြေးရန် ကြိုးပမ်းမှုကို ဟန့်တာထိန်းသိမ်းသည်” ဟု ပါရှိခဲ့သဖြင့် အကျဉ်းသားများက ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်သည် ဟု ထိုအကျဉ်းသားများ အရေးလိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)မှ တနင်္သာရီတိုင်း စည်းရုံးရေးမှူး ကိုသန်းထွန်းက ဆိုသည်။
at 9/16/2013 10:21:00 AM No comments:
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန နိုင်ငံရေး/စစ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အောက်က လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့လျှော့ချရေးဆိုင်ရာရုံး အရာရှိတွေ မြန်မာပြည်ကို ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း လာမယ်လို့ အမေရိကန်သံရုံးက ဒီမနက် ဖေ့ဘုတ်မှာ ကြေညာပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်း ရှင်းလင်းရေး ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့အတွက် လာကြမှာပါ တဲ့။ မကြာသေးခင် မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်
တွေကြောင့် ဒီအကြောင်းအရာကို ဆွေးနွေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ဒုက္ခရောက် ထိခိုက်ခဲ့ရသူတွေကို မြေမြှုပ်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီ ပေးဖို့၊ လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ဖြစ်စဉ်ကို အထောက်အကူ ပေးဖို့အတွက် အမေရိကန် အစိုးရက ကြိုးပမ်းနေပါတယ် တဲ့။
at 9/16/2013 10:19:00 AM No comments:
၀န်ကြီးနှင့်အမတ်များကို မကြောက်ရန် ပြည်သူကို ၀န်ကြီးဦးဇော်အေးမောင် တိုက်တွန်း
အစိုးရ၀န်ကြီးများနှင့် လွှတ်တော်အမတ်များကို ပြည်သူများအနေဖြင့် ကြောက်မနေဘဲ ပြောရဲ၊ ဆိုရဲရှိရန်လိုကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
“ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ပြည်သူတွေ သခင်စိတ်ရှိဖို့ သိပ်လိုတယ်။ အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးဆိုရင် အလိုလို ဒူးတုန်ကြောက်နေတယ်။ အမှန်မှာ ကြောက်စရာမလိုဘူး။ ၀န်ကြီးဆိုတာ ကိုယ်ခန့်ထားတာ ကိုယ်က ပြောရမှာ ကိုယ်က ခိုင်းရမှာ။ လွှတ်တော်အမတ်လာခဲ့ ငါဒီလိုပြောချင်တယ်။ လိုအပ်ရင်ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
at 9/16/2013 10:08:00 AM No comments:
လူမှုရေး ဖောက်ပြန်မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံရပြီးနောက် တောင်ကိုရီးယား ရှေ့နေချုပ် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အစိုးရ ရှေ့နေချုပ်ဖြစ်သူ ချေဒုန်ဝုခ်သည် ခင်ပွန်းရှိသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် လူမှုရေး ဖောက်ပြန်ခဲ့ပြီး ယင်းအမျိုးသမီးနှင့် ကလေးတစ်ဦး ရရှိခဲ့သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များ ထွက်ပေါ်ပြီးနောက်တွင် ၎င်းတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည့် အစိုးရရှေ့နေချုပ် ရာထူးမှ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်က နုတ်ထွက်သွားခဲ့သည်ဟု အင်တာနက် သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။
at 9/16/2013 10:04:00 AM No comments:
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့တွင် တိုင်းရင်းသားတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရေး အဓိကထားပြောကြား
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားကို နေပြည်တော်တွင် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က ကျင်းပခဲ့ရာ ထိုအခမ်းအနား၌ တိုင်းရင်းသားများ၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းရင်းသား ပါတီများက အများဆုံး အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့ကြသည်။
နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် သဘင်ဆောင်တွင်ကျင်းပသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ တွင်တိုင်းရင်းသားပါတီအများအပြားကစာတမ်းများဖတ်ကြားခဲ့ပြီး၎င်းတို့၏စာတန်းတို့တွင်ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့် သည်သာ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီဖြစ်သည်ဟု ထည့်သွင်း ဖတ်ကြားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
at 9/16/2013 10:02:00 AM No comments:
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် ၊ ဆွပ်ပလောင်း ကျေးရွာအနီး ၊ ကျိုင်းတုံ - တာချီလိတ် ကား လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၅၅ ကီလိုမီတာနှင့် ၅၆ ကီလိုမီတာ အကြားတွင် စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်နံနက် ၁ဝ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်က ကျိုင်းတုံမှ တာချီလိတ်သို့ ယာဉ်အမှတ် ၇က/၄၃၇၈ Light Turck အမျိုးအစား ယာဉ်သည် အရှိန်လွန်ကာ လမ်း၏ လက်ယာဘက် ပေ ၅ဝ ခန့် အနက်ရှိ နမ့်လုံချောင်း အတွင်းသို့ ထိုးကျ တိမ်းမှောက် ခဲ့သဖြင့် အမျိုးသား ၂ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၇ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၉ ဦးသေဆုံပြီး ၁၄ ဦးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။